कोरोना डायरीः घरेलु जडिबुटीको नियमित सेवनले ठिक भएँ – Health Post Nepal
२०७७ असोज २३ गते १४:२७
नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवाली
मलाई शुक्रबार बेलुका अलि–अलि टाउको दुखे जस्तो भयो। शनिबार बिहान रुघा लागेको जस्तो भएको थियो। घाँटी पनि पनि खसखस गर्यो। दिउँसो ज्वरो आउन थाल्यो।
ज्वरो अघिपछि रुघा लागेको समयमा आउनेभन्दा कडा खालको थियो। शरीर दुख्ने, कमजोरी भएजस्तो लक्षण देखियो। कोरोनाको जस्तो लक्षण लागेपछि असोज ११ गते गएर पिसिआर परीक्षण गराए। भोलिपल्ट रिर्पोट पोजिटिभ आयो।
मबाहेक घरमा श्रीमति, छोरा छोरी सबैलाई लक्षण देखिएकोले असोज १२ गते उनीहरुको पनि पिसिआर परिक्षण गरियो। रिर्पोट सबैको पोजिटिभ आयो।
जति धेरै कुरा कोरोना भाइरसको बारेमा जानेकोबुझेको भए पनि पहिलोपटक आफूलाई संक्रमण देखिएको थाहा पाउदाँ निकै डर लाग्ने रहेछ।
पोजिटिभ आएपछि सामान्य लक्षण देखिएको र सबै परिवारलाई संक्रमण भएपछि छिमेकी र आफन्तलाई जानकारी गराएर घरमै आइसोलेसनमा बस्यौं।
आयुर्वेदको चिकित्सक भएकाले पहिलेदेखि नै जडिबुटीहरुको मात्रा मिलाएर त खाइरहेका थियौं नै। संक्रमण भएपछि पनि गुडूची (गुर्जो) एक चम्चा २ कप पानीमा पकाएर एक कप बाँकी रहेपछि ४/५ पत्ता तुलसीको पात राखी छानेर चिया जस्तै गरी, च्यवनप्रास एक/एक चम्चा बिहान/बेलुका, अश्वगन्धा चुर्ण एक/एक चम्चा बिहान/बेलुका, यस्टीमधु चुर्ण एक/एक चम्चा र त्रिकटु एक/एक ग्रामका दरले बिहान/बेलुका मनतातो पानीसँग खाने गरियो जसले गर्दा तीन दिनमै सबै लक्षण हराएर गयो।
ज्वरो आएको बेला सिटामोल पनि खाएँ। भिटामिन सि, डि र भिटामिन बी कम्पेक्स पनि खायौं। तीन दिनसम्म लक्षण देखियो। त्यसपछि भने सबै लक्षण हराएर ठीक हुँदै गयो। यस्तोबेला सबै पोजिटिभ भएकोले कसलाई कतिबेला समस्या बढ्ने हो भन्ने चिन्ता हुने रहेछ।
घरबाट बाहिर निस्कन नमिल्ने भएकाले आवश्यक सामानका लागि पसलमा फोन गरेर गेटबाहिरसम्म ल्याइदिन भन्यौं। मेरो श्रीमतिको दिदी पनि नजिकै बस्नुहुन्छ। उहाँले नै आवश्यक परेका सरसामानहरु ल्याइदिनुभयो।
घरमा बसेको बेला धेरै साथीभाइसँग फोन र म्यासेन्जरमा कुरा भयो। कतिजनाले घरमा एक जनाको पोजिटिभ आएपछि अरुलाई लक्षण भए पनि जाँच नगरी घरमै आइसोलेसनमा बसेको पनि थाहा पाएँ।
जटिबुटीबारे जानकारी लिन, मलाई यस्तो समस्या भयो, कुन जडिबुटी कसरी खाउँ भनेर दैनिक १२÷१५ जना नयाँ व्यक्तिले फोन गर्नुहन्थ्यो। संक्रमण देखिए पछिको अवस्था अलि फरक हुने रहेछ।
यसले मानिसको मनमा कसरी डर जमाएर बसेको छ भन्ने अनुभव पनि भयो। छिमेकीहरु हामी छतमा गयो भने पनि छतबाट सर्ला झै गरेर डराउनुभयो।
त्यसैले हामीमध्ये कोही छतमा जानुपरेमा पनि मास्क लगाएर जाने गथ्र्यौं। कसैले फोनमा पनि सर्छ कि झै गरेर कुरा गरेको अनुभव हुँदा भने डरले निकै जरा गाडेको छ भन्ने लाग्यो। यो हाम्रो लागि छिमेकी र आफन्त चिन्ने मौका पनि भयो। कति आफन्त त अप्ठ्यारो पर्यो भने सहयोग गर्न पर्न सक्छ भनेर थाहा नपाए जस्तो पनि गरे।
कतिले औपचारिकता मात्र निभाए। यसबाट हामी विचलित भएनौं। यो सबै अज्ञानताको परिणाम हो। हामीले पर्याप्त जनचेतना जगाउन सकेका रहेनछौं।
हामीले घरमा चना उमारेर झोल बनाएर प्रसस्त खायौं। त्यस्तै ज्वानोको झोल, कुरिलोको झोल पनि खुब खायौं। पाँच दिनपछिबाट मासुको झोल बनाएर खान थाल्यौं। शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुन दिनु हुँदैन।
पानीको मात्रा पुगे फोक्सोलाई अक्सिजन लिन सजिलो हुने वैज्ञानिक आधार छ। त्यसैले कहिले काँही जीवन जल बनाएर पनि खायौं। ९४ भन्दाबढीमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुनाले अनुलोम विलोम पनि गर्ने गर्यौं।
घाम मा बस्ने, एक अर्काको अवस्था जानकारी लिने पनि गर्यौं। यो रोगले हामीलाई दुःख नदिए पनि यो कसै कसैलाई कडा रुपमा पनि आउन सक्छ। कोरोना संक्रमण जहिले जो कोहीलाई पनि देखिन सक्छ।
त्यसैले सरकारले भनेका सबै मापदण्ड पालना गरौं। कसैलाई पोजिटिभ देखिएपछि घरमा सबै मापदण्ड पालना गरेर कम्तिमा १४ दिन आइसोलेसनमा बसौं। नियमित रुपमा जडीबुटी सेवन गर्ने, भीडभाडमा नजाने र वुद्धवद्धा र दीर्घ रोगी बचाउने काम गरौं।
डा. प्रकाश ज्ञवाली